उत्पादनको नाम पुल गार्डेल
सामग्री स्टेनलेस स्टील कम्पोजिट पाइप
रङ अनुकूलन योग्य
साइज अनुकूलन योग्य
1. उत्पादन जीवन वृद्धि गर्न विरोधी जंग र विरोधी रस्ट प्रविधि प्रयोग गर्दै।
2. सतह स्टेनलेस स्टील बनेको छ र राम्रो आत्म-सफाई गुण छ।
3. पुल गार्डरेल स्थापना गर्न सजिलो छ, क्षति गर्न सजिलो छैन, राम्रो स्थिरताको लागि केहि सम्पर्क सतहहरू छन्।
4. पुलको रेलले पैदल यात्रुको सुरक्षा, सुन्दर र लागत-प्रभावी सुरक्षा गर्दछ।
पुल गार्डरेल निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने समस्याहरू
1. गार्डरेल निर्माणको क्रममा, विभिन्न सुविधाहरूको डाटा सही रूपमा मास्टर गरिनेछ, विशेष गरी सबग्रेडमा गाडिएका विभिन्न पाइपलाइनहरूको सही स्थिति। निर्माण प्रक्रियाको क्रममा भूमिगत सुविधाहरूमा कुनै पनि क्षति पुर्‍याउन अनुमति छैन। भूमिगत सञ्चार पाइपलाइन, ड्रेन पाइप वा कल्भर्टको अपर्याप्त गहिराइ भरिने अवस्थामा, स्तम्भको स्थिति समायोजन वा स्तम्भको फिक्सिङ विधि परिवर्तन गरिनेछ।
2. जब स्तम्भ धेरै गहिरो हुन्छ, स्तम्भ सुधारको लागि बाहिर तानिने छैन। बाँकी बाहिर तानिनेछ, र यसको जग ड्राइभ गर्नु अघि फेरि ट्याम्प गरिएको छ, वा स्तम्भको स्थिति समायोजन गरिनेछ।
3. पुलको रेललाई फ्ल्यान्ज प्लेटको साथ स्थापना गरिनेछ, र फ्ल्यान्ज प्लेटको स्थिति र स्तम्भ शीर्ष उचाइको नियन्त्रणमा ध्यान दिइनेछ।
अघिल्लो: मेडिकल स्टेनलेस स्टील तार टोकरी/कीटाणुशोधन टोकरी
अर्को: आँगन भिला पर्खाल सुरक्षा सुरक्षा फलामको बार
बगैचा लन स्टेनलेस स्टील बाँस रेलिंग
स्टेनलेस स्टील बाँस जस्तै गार्डरेल श्रेणी 1. अनुकरण बाँस बार: बाँस लिङ्क रेलिंग सदस्यहरु को विशिष्टता अनुसार तीन उत्पादनहरु मा विभाजित छ। नक्कली बाँस पाइपहरूको व्यास क्रमशः 17 मिमी, 19 मिमी र 25 मिमी छन्। 2. नकली बाँसको फूल र घाँसको बार: नक्कल बाँसको फूल र घाँसको बारको विकल्प उत्पादन PVC ल्यान बार हो। बाँस रेलिंग एक क्रोमियम मिश्र धातु उत्पादन हो, जो उच्च शक्ति द्वारा विशेषता हो, ...
आँगन भिल्ला फलामको बारको परिचय १. बारले स्थायी कोटिंग विधि प्रयोग गरिरहेको छ, खिया छैन, फ्लेक बन्द छैन, रङ फेडिएको छैन, अन्तिममा उज्यालो र रंगमा स्थिर छ। 2. कुनै वेल्डिङ असेंबली डिजाइनले स्थापनालाई थप सरल र छिटो बनाउँदैन। 3. चार तह विरोधी संक्षारक उपचार र बीस वर्ष भन्दा बढी सेवा जीवन मौलिक रूपमा लागत बचत गर्छ। 4. वातावरण संरक्षणले भवनहरूमा प्रदूषण हुने सामान्य उत्पादनहरूको समस्या समाधान गर्छ। 5. कच्चा साथीको कठोर र लचिलो कारकहरू...
मुख्य उत्पादनहरू: सोलार एन्टी ग्लेयर रेलिंग, ग्याल्भेनाइज्ड स्टिल रेलिंग, नगरपालिका सडक रेलिंग, पैदल यात्री सडक रेलिंग, मोटर चालित र गैर-मोटराइज्ड रेलिंग, रोड सेन्टर रेलिंग, बिलबोर्ड सहितको रोड रेलिंग, रिभर रेलिंग, ल्यान फ्लावर बेड गार्डरेल नगरपालिका सडक पृथकता पूर्ण गार्डरेलहरू छन्। , धेरै किस्महरू, र उचाइ र रंग मनमाने ढंगले चयन गर्न सकिन्छ। म्युनिसिपल रेलिंग एक्सप्रेसवे को बिचमा राखिएको सुरक्षात्मक रेलिंग हो, जसको लक्ष्य प्र...